မို့မို့မြင့်အောင်ရဲ့ မွေးနေ့လေးမှာ သတိတရနဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ ရဝေအောင် – Suehninsi
မင်းသားချောရဝေအောင်ကတော့ တစ်ချိန်ကပရိသတ်အချစ်တွေကို အများကြီးရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ။ လက်ရှိအချိန်မှာလည်း အနုပညာအလုပ်တွေမလုပ်တော့ပေမဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တွေကို ရရှိထားဆဲလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရဝေအောင်ကတော့ အမေမွှေးလို့သိကြတဲ့ မို့မို့မြင်အောင်ရဲ့မွေးနေ့မှာ
သတိတရနဲ့ဆုတောင်းပေးတဲ့အကြောင်းကို “Happy Birthday… ! Ma Moht အနုပညာနှင့်ပတ်သက်လျှင် အမြဲတမ်း သင်ပြ လမ်းညွှန်ပေးသော အနုပညာ မောင်နှမဆိုပေမဲ့ တကယ် မောင်နှမ သားအမိ ကဲ့သို့ ချစ်ခင်ရသော မေမွှေး(မမို့)မွေးနေ့မှာ စိတ်ရော ကိုယ်ပါ
ကျန်းမာ ချမ်းသာပြီး ချစ်သော အနုပညာ ကို အသက်ထက်ဆုံး နုပျိုလှပခြင်းများစွာဖြင့် လုပ်ကိုင်နိင်ပါစေ..” ဆိုပြီးတော့ ရေးသားထားတာပါ။ မို့မို့မြင်အောင်ကတော့ အနုပညာလောကမှာ တကယ့်ကိုစံထားရတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ အသက်(၅၉) နှစ်ပြည့်သွားတာဖြစ်ပြီး ရဝေအောင်ကတော့ သတိတရနဲ့မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တာပါ။
မငျးသားခြောရဝအေောငျကတော့ တဈခြိနျကပရိသတျအခဈြတှကေို အမြားကွီးရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျပါ။ လကျရှိအခြိနျမှာလညျး အနုပညာအလုပျတှမေလုပျတော့ပမေဲ့ ပရိသတျတှရေဲ့အခဈြတှကေို ရရှိထားဆဲလညျး ဖွဈပါတယျ။ ရဝအေောငျကတော့ အမမှေေးလို့သိကွတဲ့ မို့မို့မွငျအောငျရဲ့မှေးနမှေ့ာ
သတိတရနဲ့ဆုတောငျးပေးတဲ့အကွောငျးကို “Happy Birthday… ! Ma Moht အနုပညာနှငျ့ပတျသကျလြှငျ အမွဲတမျး သငျပွ လမျးညှနျပေးသော အနုပညာ မောငျနှမဆိုပမေဲ့ တကယျ မောငျနှမ သားအမိ ကဲ့သို့ ခဈြခငျရသော မမှေေး(မမို့)မှေးနမှေ့ာ စိတျရော ကိုယျပါ
ကနျြးမာ ခမျြးသာပွီး ခဈြသော အနုပညာ ကို အသကျထကျဆုံး နုပြိုလှပခွငျးမြားစှာဖွငျ့ လုပျကိုငျနိငျပါစေ..” ဆိုပွီးတော့ ရေးသားထားတာပါ။ မို့မို့မွငျအောငျကတော့ အနုပညာလောကမှာ တကယျ့ကိုစံထားရတဲ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျလညျး ဖွဈပါတယျ။ ဒီနမှေ့ာတော့ အသကျ(၅၉) နှဈပွညျ့သှားတာဖွဈပွီး ရဝအေောငျကတော့ သတိတရနဲ့မှေးနဆေု့တောငျးပေးခဲ့တာပါ။
Source : Moh Moh Myint Aung’s Facebook | Reference & Credit : Cele Gabar